Nahoana No tsy Maintsy Resaka Kolikoly Ireo Fiampangàna Ny FIFA Ataon’ny Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2015 15:06 GMT
Lalaon'ny Tompondaka Maneran-tany FIFA 2014 tany Brezil; sary avy tamin'i alobos Life, ampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC-ND 2.0.
Eny e, aleo ary…miandry. Raha nanao bemidina tao amin'ny hotely Zurich ireo Feds Amerikana, niara-niasa tamin'ireo manampahefana Soisa, ny faramparan'ny volana May, ary nisambotra tomponandraikitra maro tao amin'ny FIFA, voalaza tao amin'ilay fiampangàna ihany koa i Jack Warner, ilay filoha lefitra teo aloha an'ny FIFA, izay mahagaga, tsy niala teo amin'ny tanin'i Trinite sy Tobago mihitsy efa an-taonany maro izay, ary nandà mafy ny tsy mbola nanaiky nandray tsolotra, ary nitanisa lahatsoratra miaro fanesoana avy tamin'ny The Onion mihitsy, tamin'ny fiarovantenany mahatsiravina [mandehana any amin'ny ampaham-potoana 5:01 amin'ito lahatsary ambany ito]:
Ka mamelà ahy ianareo raha somary very kely aho, herinandro iray aty aoriana, ilay Jack Warner iny ihany mihitsy no nanangam-peo ary nanandrana ny hampiditra ny praiminisitra amperinasa tamin'ilay raharaha, tamin'ny filazàna fa hamboraka antontan-taratasy manome ny antsipirihany ny “fahalalàny sy ny fidirany” tamin'ny “famatsiam-bolan'”i FIFA izy, ny fomba fifandrohizan'ilay “famatsiam-bola” amin'ny antoko politika izay tantanan'ny Praiminisitra Kamla Persad-Bissessar, ary ny fomba nahavitan'izany vola izany ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana ny taona 2010 izay nitondra azy teo amin'ny toerany. Nandefa hafatra mazava ho an'ny sangany ara-politikan'i Trinite sy Tobago i Warner, fa raha ho ahondrana izy, ho sarangotiny midina miaraka aminy ihany koa izy ireo; miantso ny hisian'ny fanadihadian'ny polisy ankehitriny ny fiarahamonim-pirenena hijerena raha toa ka nanitsakitsaka na tsia ny lalànan'ny famotsiam-bola ny governemanta:
Tsy afaka manao zavatra toy izany ianareo. Fa miandry fotsiny hoe hihatsara io. Io koa moa, Trinite sy Tobago, tanin'ny “lehilahy marani-tsaina”. Tsy antsoin'izy ireo hoe “Trickidadiana” amin'izao fotsiny koa isika. Mamerimberina milaza i Warner fa haza lambo atao amin'ireo firenena andalam-pandrosoana io fiampangàna azy io, mampitovy ny tenany amin'ireo olona roa mamim-bahoaka indrindra izay indraindraina maneran-tany amin'ny fanoherana tsy mampiasa herisetra: “niditra am-ponja i Nelson Mandela. Niditra am-ponja i Gandhi. […] Ka iza moa i Jack Warner?”
Iza i Jack Warner? Mieritreritra aho hoe miankina amin'ny pilina atelinao io. Nisy resaka be loatra teto amin'ny Aterineto momba ny antony ambadik'ireo fisamborana ny ekipan'ny FIFA. Malaza be ny hoe fikomiana manodidina ny resaka fitadiavam-pahefana ara-jeografika sy politika iny. Ao anatin'izany rehetra izany koa ny firazanana. Tsy vendrana akory aho ka hieritreritra hoe tsy hiditriditra amin'ny zavatra rehetra kitihany ireo ny politika sy ny fahefàna, sahala amin'ny rano maloto avy amin'ny toeram-pivoahana. Ekeko ny fanirian'ireo firenena andalam-pandrosoana hanatsimbadika an'i Oncle Sam (Dadatoa Rasamy) aho, sy hoe matetika mitondra ny resaka politika hatrany amin'ny fanatanjahantena i Etazonia, toy ireo firenena hafa ihany. Fa kosa, ny hilaza fa nanao izao i Etazonia mba ahafahan'ny “Tandrefana” maka indray ny fitantanana ilay kilalao mahafinaritra sy ireo tombotsoany izay mahasarika bebe kokoa ve? Ny milaza fa ny Minisiteran'ny Fitsaràny, izay vao nanomboka notantanan'ny vehivavy mainty hoditra, dia nivoaka nisambotra an'i Jack Warner satria izy lehilahy mainty hoditra? (Fotsy hoditra ny ankamaroan'ireo tomponandraikitry ny FIFA nosamborina tao Zurich). Tena mila manontany tena mihitsy aho hoe sao nilaozan'ny lohjika rehetra ary ilay tranobe. Eo ankilany, raha misy ny olona mitazona ireo firenena an-dàlam-pandrosoana amin'ny tsy firaharahiana, i Jack Warner izany, izay nampangain'ny Federasiônan'ny Baolina Kitra an'i Trinite sy Tobago (TTFF) ho nandanilany tamin'ny tsy antony ny vola avy tamin'ny ezaka fanampiana ho an'i Haiti tamin'ny horohorontany ny taona 2010.
Raha te-hino ianao hoe, hatrany ifotony, tsy resaka kolikoly ilay fanenjehana natao tamin'ny FIFA iny, tsy maninona. Misy sy ampy tsara ireo resaka fitakiam-bola, famotsiam-bola, hosoka ary kolikoly ahafahana manodinkodina ny lohan'ireo mpanao politika, fa avelao hajanona iray minitra monja eo aloha ny tsy finoantsika, ka andao ataontsika hoe tena adala tokoa ny governemanta Amerikana nanao ireo fisamborana lehibe sy nankalazaina be ireo kanefa tsy nanana porofo mazava tsara mba hiampangàna akory. Raha tsy izany, resaka momba ny toekarena io raharaha mahatsiravina io, miaraka amin'ireo manampahefan'ny FIFA mitazona ny fanalahidin'ny fifanakalozana ara-barotra sy ny hiran'ny Tontolo Atsimo rehetra, ho an'ny sakafo harivany .
Mifanohitra amin'ny tian'ireo tompon'andraikitra mitantana ny resaka baolina kitra hanehoana ny tenany— ho toy ny Robin des bois, maka avy amin'ny manankarena mba hanome ny mahantra, na ny Anjely mpiaro, manampy ny hahatanterahan'ny nofinofy momba ny baolina kitran'ireo ankizilahy zarazara hoditra mahantra an'arivony—nataony lasa tafahoatra mangingina tamin'ny ambaratongan'ny mpanararaotra izay mipetraka eo anelanelany izy. Ndeha ny masontsika atodika any amin'ny baolina. Na inona na inona antony nahatonga na tsia ireo fiampangàna ireo, tsy maintsy ny kolikoly ihany no tena fototr'ilay olana. Raha jerena amin'ny antony rehetra io—satria hoe tafakatra hankany amin'ny Lalaon'ny Tompon-daka Maneran-tany ny ekipanao, na koa hoe satria ny firenenao nahazo fotodrafitrasa na fitomboan'ny seraseran'ny fizahantany—fomba fiadin'ny FIFA izany, tsy misy iavahany amin'ireo mpilalao amin'ny Lalaon'ny Tompon-daka Maneran-tany mody mianjera eny amin'ny kianja ary miezaka ny hiantsoan'ny mpitsara lalao ny fahadisoana amin'ny zavatra tsy tokony isian'izany akory.
Tokony kolikoly foana izany satria efa tena fotoanany izao hampifandraisantsika ne teboka rehetra. Samy afaka hita eny amin'ny tsiky finaritr'ilay “lehilahy mrani-tsaina” daholo ny fiakaran'ny tahan'ny heloka bevava ao Trinite sy Tobago, ireo aretin'ny politika, ny tsy fahombiazan'ny tolotra sosialy, ary ny hantsana lehibe ara-toekarena misy eo amin'ny manana sy ny tsy manana. Tena nahafanina tsara tokoa ireo Trinbagoniana aloha ny hoe mety handraisan'ireo jiolahy an-databatra ny valin'asany tampotampoka teo, na ho eo am-pelatanan'i Etazonia mihitsy, satria tena tsy mbola nisy hatrizay tokoa ny toy izany.
Kanefa mbola tsy fantatro tsara raha avy amin'ny fahatairana fotsiny na avy amin'ny zava-bita tafahoatra loatra nataon'ireo manampahefantsika ny mahatonga io fanina io; raha mba afaka trandrahantsika bebe kokoa mantsy io.